50 Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Olee akwụkwọ+ m ji gbaa nne unu m chụpụrụ achụpụ+ alụkwaghịm? Ma ọ bụ, ònye n’ime ndị m ji ụgwọ ka m resịrị unu?+ Lee! Ọ bụ n’ihi njehie unu+ ka e rere unu, ọ bụkwa n’ihi mmebi iwu unu ka a chụpụrụ nne unu.+ 2 Gịnị mere na o nweghị onye nọ+ mgbe m batara? Gịnị mere na ọ dịghị onye zara+ mgbe m kpọrọ òkù? Aka m ọ̀ dịla mkpụmkpụ nke na ọ pụghị ịgbapụta unu,+ ka ọ̀ bụ na mụ adịghị ike ịnapụta unu? Lee! M na-eji ịba mba m+ eme ka oké osimiri taa;+ m na-eme ka osimiri ghọọ ala ịkpa.+ Azụ̀ dị na ha na-esi ísì n’ihi na mmiri adịghị, ha na-anwụkwa n’ihi agụụ mmiri.+ 3 M na-eyiwe eluigwe ọchịchịrị dị ka uwe,+ m na-emekwa ka ákwà mkpe bụrụ ihe mkpuchi ya.”+ 4 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova enyewo m ire nke ndị a kụziiri ihe,+ ka m wee mata otú m ga-esi zaa onye ike gwụrụ okwu.+ Ọ na-akpọte m kwa ụtụtụ; ọ na-akpọte ntị m ịnụ ihe dị ka ndị a kụziiri ihe.+ 5 Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova emeghewo ntị m, mụ onwe m enupụghịkwa isi.+ Atụgharịghị m gawa n’ebe ọzọ.+ 6 M cheere ndị na-eti ihe azụ m, ọ bụkwa ndị na-efopụ ajị ka m cheere ntì m.+ Ewepụghị m ihu m iji zere mkparị na ịgbụ m ọnụ mmiri.+ 7 Ma Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ga-enyere m aka.+ Ọ bụ ya mere na ihere agaghị eme m. Ọ bụ ya mere m ji mee ka ihu m sie ike dị ka nkume siri ike, amakwa m na ihere agaghị eme m.+ 8 Onye na-ekwupụta na m bụ onye ezi omume nọ nso.+ Ònye pụrụ ịlụso m ọgụ? Ya bịa ka mụ na ya guzoro.+ Ònye nwere okwu ikpe megide m?+ Ya bịaruo m nso.+ 9 Lee! Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ga-enyere m aka. Ònye pụrụ ịkpọ m onye ajọ omume?+ Lee! Ha niile ga-aka nká dị ka uwe.+ Nla ga-erichapụ ha.+ 10 Ònye n’ime unu na-atụ egwu+ Jehova wee na-ege ohu ya ntị.+ Ònye jeworo ije n’ọchịchịrị,+ onye na-enweghịkwa ìhè? Ya tụkwasị obi n’aha Jehova,+ daberekwa na Chineke ya.+ 11 “Lee! Unu ndị na-amụnye ọkụ, ndị na-eme ka ikerike ọkụ nwuru ọkụ, jeenụ ije n’ìhè si n’ọkụ unu, n’etiti ikerike ọkụ unu mụnyere. Ọ bụ n’aka m ka unu ga-enweta ihe a: N’ihe mgbu ka unu ga-atọgbọrọ n’ala.+